कर/राजश्व Achives| Page3of 44
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको लकडाउन लागू गरेको झण्डै अढाई महिना भएको छ । सोही कारण उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय ठप्प छ । लकडाउनको कारण अर्थतन्त्र चौपट बन्दै गएको छ भने जनजीवन दिनप्रतिदिन कष्टकर बन्दै गएको छ …
कर बढ्न लागेको चाल पाएपछि बजेटको अघिल्लो दिन एमजी र कियाका १४२ गाडिको जाँचपास
वीरगन्ज । भन्सार महसुल बढ्ने सूचना पाएपछि आयातकर्ताले विद्युतीय सवारी साधन हतार–हतार बजेट भाषणको अघिल्लो दिनसम्म जाँचपास गराएर लगेका छन्। लामो समयदेखि थन्क्याएर राखिएका ती गाडी लैजान आयातकर्ता र सरकारबीच मिलेमतो आशंका गरिएको छ। सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय प्रमुख उमेश श्रेष्ठले जेठ १४ …
विद्युतिय सवारी साधनको नयाँ कर ठिक छः अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विद्युतिय सवारी साधनमा लगाइएको नयाँ करको व्यवस्था ठिक भएको बताएका छन् । प्रतिनिधी सभामा बजेटमाथीको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री डा. खतिवडाले विद्युतिय सवारी साधनहरुमा लगाइएको कर ठिक भएको बताएका हुन् । विद्युतिय सवारी साधनमा कर …
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) प्रभावित व्यवसायलाई राहात दिने र शिथिल भएको आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान बनाई पुनरुत्थान गर्न भन्दै करका दरहरुमा छुट र सहुलियत प्रदान गरिएको छ । बिहीबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बार्षिक २० लाख रुपियाँसम्म कारोबार गर्ने …
समयमै अन्तराष्ट्रिय उडान र सिमा नाकाहरु बन्द गरिएकाले नेपाल कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिमबाट बच्न सफल भएको छ । सिमा नाकाबाट भैरहेका ओहोर दोहोरका कारण हुने संक्रमणका जोखिम अहिले पनि देखिएका छन् । तर समयमै सिमा नाका बन्द नगरिएको भए आज भयावह अवस्था आउने …
काठमाडौं । कोरोना भाइरस(कोभिड १९) का कारण अहिले हामी एकदमै अप्ठेरो परिस्थितिको सामना गरिरहेका छौं । नेपाली अर्थतन्त्रले एक दशक लामो जनयुद्ध भोगेको छ । दशक लामो राजनीतिक संक्रमण पनि भोगेको छ । त्यसपछिको भूकम्प र नाका बन्दी पनि हामीले पार गरिसकेका छौं …
कर तिर्ने समय एक महिना थपियो, यस्ता छन् करका सहुलियत
काठमाडौं । सरकारले चैत र बैशाख महिनाको कर तिर्ने समय एक महिना थपिदिएको छ । बैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले चैत र बैशाख महिनाको कर राजश्व तिर्ने म्याद एक महिना थपेर जेठ २५ गतेसम्म पुर्याएको हो ।
एनसेलले तिर्यो सबै लाभकर, आजै बुझायो १४ अर्ब ३३ करोड
काठमाडौँ । एनसेलले सरकारलाई तिर्न बाँकी सबै पुँजीगत लाभ कर चुक्ता गरेको छ। एनसेलले आज ठूला करदाता कार्यालयमा १४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर तिरेको जनाएको छ । एनसेलका अनुसार यसअघि २ पटकमा ९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर तिरेको थियो …
भैरहवा । भैरहवा भन्सार कार्यालयले कोभिड–१९ सङ्क्रमण तथा रोकथामका लागि शुरु भएको लक डाउनको अवधिको १२ दिनमा रु २९ करोडभन्दा बढी राजश्व सङ्कलन गरेको छ । उक्त भन्सारले चैत ११ गते देखि २२ गतेसम्मको १२ दिनको अवधिमा रु २९ करोड २५ लाख राजश्व …
काठमाडौं । सरकारले कोरोना संक्रमणसँग जुध्न अघि सारेको राहत प्याकेजमा घोषित कर छुट तथा सहुलियत योजना कार्यान्वयन गरेको छ । मन्त्रालयले मंगलबार आन्तरिक राजश्व विभागले पत्र लेख्दै सरकारले अघि सारेका सबै छुट तथा सहुलियत कार्यान्वयन गर्न भनेको हो । सरकारले कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा …
काठमाडौं । ठूला करदाता कार्यालयमा आज एनसेलले चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँ कर बुझाएको छ । सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अनुसार एनसेलले सरकारलाई २२ अर्ब ४५ करोड बुझाउनु पर्ने देखिएको ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक झलकराम अधिकारीले बताए । ‘फैसलापछि एनसेलले जम्मा …